Madaxweynaha Soomaaliya oo ku wajahan magaalada Addis Ababa. – Radio Daljir
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku wajahan magaalada Addis Ababa.
Agoosto 5, 2016 1:17 b 0
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminyao ayaa saakay u amba baxay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya isagoo halkaasi kaga qeyb galaya shir looga hadlayo xaaladaha dalalka Soomaaliya iyo Suudaan.
Shirkan maanta ka furmaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa waxaa ka qeyb galaya madax ka socota qaar ka mid ah wadamada Afrika, waxaana inta badan diirada lagu saari doonaa xaalada guud ee Soomaaliya iyo colaadaha ka aloolsan Koonfurta Suudaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu wadaa in uu khudbad ka jeediyo kulankaan, oo ay isugu imaan doonaan qaar ka mid ah Madaxda dalalka Afrika iyo hey’adaha daneeyo Amniga.
Safarka madaxwaynaha Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada iyo dawlada dhexe ay u fadhiyaan shirkii ugu danbeeyey ee lagu meel marinayey doorashada Soomaaliya 2016.
Madaxweynaha Puntland oo Muqdisho kula kulmay safiirka Imraadka ee Soomaaliya.
Puntland oo walaac ka muujisay qaybsiga xujayda Soomaaliyeed.